Iimeko ezi-6 zemihla ngemihla zokufumana inkuthazo | Uncwadi lwangoku
UPablo Picasso ukhe wathi nge «ukuba ukhuthazo luza, mandizibone ndisebenza«, Umhlangano oqinisekisa uluvo lokungalindi i-muses, evumela yonke into ukuba iqukuqele kunye nenkuthazo yokwenza njalo ngobomi bethu, intshukumo yethu. Ukuba nawe uyabakhuthaza aba iimeko zemihla ngemihla ukuthatha inkuthazo, ukuguqulela izimvo zakho kuba yinto elula.
1 Jikeleza ngezithuthi zikawonke-wonke
2 Ziqhelise ukucamngca
3 Funda incwadi
4 Ipeyinti yeemandalas
5 Jonga ukutshona kwelanga
6 Kwaye imfihlo yam, ndiyavuma: Ukuhlamba izitya!
Jikeleza ngezithuthi zikawonke-wonke
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ndikuxelele ukuba Uncwadi lweLaPrek, uhlobo lwamaNdiya oluvele emva kwengcinga eqaqambileyo yentatheli evela eDelhi eyaqala ukubhala nokuzoba malunga nabantu abathatha indlela engaphantsi kunye nayo yonke imihla. Umzekelo wezihlandlo ezilikhulu zokucingisisa ngokusingqongileyo okunokuhlwayela kuthi umbono esinokuthi siwubeke ephepheni; Ngenxa yokuba, awuzange ucinge ngasese ukuba ubomi buya kuba njani kumfazi wase-Afrika ohamba phambi kwakho, loo ndoda ikhalayo okanye umfazi ohamba nabantwana abane? Ycinge.
Kucingwa njengenye yezona zifundo zindala kwihlabathi, iYoga Ibe yinto ephindaphindayo eNtshona kwabo bafuna ukwamkela ibhalansi enkulu kunye nokuba sempilweni. Umsebenzi oya kuhlala ucetyiswa ukuba uhambisane neseshoni yokucamngca ukuze ukhuphe ingqondo kwaye uvumele yonke into ukuba ihambe, ukuze sikwazi "ukuseta" i-psyche yethu kwaye sivumele izimvo ezintsha kunye nezobuchule ukuba zisoyise. Okugqwesileyo konke, ukucamngca okulula okukhokelwayo kuphulaphule isiqhumiso kunye nezibane ezimnyama ngenye imva kwemini ekhaya kunokuba yindlela engabizi kwaye isempilweni yokufumana ukuphefumlelwa. Yi le Endiythanda kakhulu.
Ukwelinye lala maxesha xa umbono olungileyo webali iyayikhathaza intloko yakho kodwa awuyazi ukuba ungayiphuhlisa njani kwaye ucofe amandla ayo apheleleyo. Kulapho uqala incwadi entsha kwaye unomdla wokuqonda ukuba umbhali ukwazile njani ukufaka umbono kuqala kunzima ukufikelela kwizibuko elilungileyo. Kukwakho neencwadi zokuzinceda, ngqondweni kunye nezinye iindlela ezininzi zokufumana ukhuthazo, kodwa mhlawumbi ukuphinda sifunde ababhali bethu esibathandayo yeyona ndlela yokufikelela kwiimbono ezintsha.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, iincwadi zokupeyinta iimandala banqobile abantu abadala abavela kwihlabathi lonke. Abantu abanoxinzelelo ababoleka iipensile zeAlpino zabantwana babo kwaye baqale ukuhlala kwezo mpawu zintsomi zenkcubeko yamaHindu ezithi iimonki zizalise isanti kwiitempile ezikude. Ipeyinti yeemandala, ngokweengcali, ivuselela imeko yasekhohlo yengqondo, leyo yokuqiqa, evumela ukuthintela iimvakalelo kwaye uveze ubuchule obungakumbi. Ngaba ukhe wayizama?
Jonga ukutshona kwelanga
Ukubukela ukutshona kwelanga kufanele kube yinto esisinyanzelo kuthi sonke, nokuba asicingi ukuba sinexesha lokwenza yonke imihla. Phuma emsebenzini uphakamise ukuhamba kwakho ekhaya, ungakhange ubeke ixesha lokufika, uthathe ithuba lokufumana iti, uhlale epakini kwaye ulungiselele ukucinga ngesibhakabhaka esi-orenji apho uninzi lweengcinga kunye neempembelelo zitshixiwe khona.
Kwaye imfihlo yam, ndiyavuma: Ukuhlamba izitya!
Impilo kunye nobuhlobo
Xa ndakhe ndaxelela umhlobo ukuba indawo enkulu yezimvo zam zivela kum ndihlamba izitya, ubuso bakhe sisibongo, kodwa ewe, andazi ukuba iMistol okanye iVileda izakuba yintoni, kodwa nanini na xa ndiqala ukuhlamba iimbiza, izimvo ziqala ukuhamba, kwaye ngokucacileyo inenkcazo. Njengamandala, Ukukhuhla kunciphisa uxinzelelo kwaye ivumela icala lasekunene lobuchopho ukuba likhululeke nangakumbi. Imeko yemihla ngemihla esebenza kakuhle kum.
Bathi ukuhamba yeyona ndlela ibalaseleyo yokubambisa, kodwa phakathi kuJanuwari, jonga ezinye iindlela ezinje ngezi iimeko zemihla ngemihla ukuthatha inkuthazo Ziyeyona ndlela ilungileyo yokufumana abo bangekhoyo.
Impembelelo iza njani kuwe?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iimeko ezi-6 zemihla ngemihla zokufumana inkuthazo